Mee ka ọnọdụ offline na Google Chrome rụọ ọrụ | Site na Linux
Na obodo m ịntanetị dị n'ụlọ dị ka ihe dị ụkọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nil, ndị anyị nwere ihu ọma nwere ohere ịnweta netwọkụ nke netwọkụ na ebe ọrụ anyị, ebe anyị na-eji kọmputa anyị ma ọ bụ laptọọpụ anyị agagharị, anyị na-achọ ozi anyị chọrọ , anyị na-amụta, wdg.
O di nwute na mgbe anyi laruru ulo ihe ndi bu eziokwu gbanwere, ma oburu na anyi nwere obi abua ma obu ajuju obula anyi apughi imeghe Google ma obu Wikipedia ma dozie nsogbu a, o bu ya mere nhọrọ iji jua offline ma obu “Work offline” nke n’etinye ihe nchọgharị dika Opera ma obu Firefox bu anyi bara ezigbo uru.
1 Gịnị bụ ọnọdụ anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ịntanetị?
2 Otu esi eme ka ọnọdụ offline na Google Chrome ma ọ bụ Chromium rụọ ọrụ
Gịnị bụ ọnọdụ anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ịntanetị?
Ka e were ya na ị nọ n’ọfịs ma mepee nkuzi ebe a na FromLinux, gụọ ya, mechie taabụ nchọgharị na voila, ị laa.
Mgbe anyị rutere n'ụlọ, anyị chọrọ imeghe nkuzi ahụ anyị hụrụ ebe a, ọ dị nwute ebe ọ bụ na anyị enweghị ịntanetị n'ụlọ anyị enweghị ike ịnweta saịtị ahụ, ebe ahụ ka ọnọdụ offline na-abata.
Anyị na-arụ ọrụ ọnọdụ na-adịghị n'ịntanetị ma ọ bụ na-arụ ọrụ na-enweghị njikọ na ihe nchọgharị anyị ma anyị nwere ike ịnweta ibe ndị anyị meghere tupu anyị enweghị ohere ịntanetị, nke a ga-ekwe omume n'ihi na ihe nchọgharị ahụ kama ịchọ ịntanetị maka ibe na ọdịnaya anyị chọrọ oghe, na-enyocha ihe omuma nke o meghere na nke di n'ime ya.
N'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ịga na peeji nke Google Chrome (ma ọ bụ Chromium) anyị meghere na mbụ ma anyị chọrọ ịkpọtụrụ ọzọ na-enweghị ịntanetị, yabụ anyị nwere ike ịtụle nyocha sitere na FromLinux, ọnụ ahịa Linio, Arch Wiki ma ọ bụ wdg, ihe a niile na-anọghị n'ịntanetị, ọ bara ezigbo uru?
Otu esi eme ka ọnọdụ offline na Google Chrome ma ọ bụ Chromium rụọ ọrụ
Na Firefox na-arụ ọrụ ọ dị mfe, anyị na-aga na menu Njikwa ma anyị na-ahụ ya na njedebe, na Opera yiri, mana… na Google Chrome anyị enweghị ike ịchọta nhọrọ a na nke mbụ.
Iji rụọ ọrụ ya, anyị na-ede ihe na-esonụ na mmanya igodo ma pịa Tinye:
Akwụkwọ mmado ga-apụta na-ajụ anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji mee ka ọnọdụ nzuzo adịghị n'ịntanetị, anyị pịa Kwado na voila, lee m na-egosi gị:
Mgbe ahụ, anyị malitegharịrị ihe nchọgharị ahụ na ọ bụ ya.
PD:… Will ga-ahụ na e nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ị nwere ike ịgbalite ma ọ bụ gbanyụọ, soro ha gwuo egwu ntakịrị, enwere ụfọdụ ịmasị 😉
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Mee ka ọnọdụ offline na Google Chrome rụọ ọrụ
Emeela m nhọrọ ahụ ogologo oge mana m mere ya na Mozilla Firefox ka m nwee ike ịgụ isiokwu ndị anyị na-eji Linux bipụtara. Cheers!
Ọ bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị nwere njikọ internetntanetị dara ogbenye ma ọ bụ nkwụsị.
Ọ dị mfe ịnweta na banyere: banyere ma si otú ahụ zere nsogbu mgbe ịnweta ibe zoro ezo nke ihe nchọgharị ahụ.
Enyi m, nke ahụ apụtaghị na m, ndị nọ n'okpuru na-apụta